TAARIIKHDA IYO WAXQABADKA SIILAA
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo wuxuu dhashay sannadkii 1936kii tuulada Dheryalay oo ka tiran degmada Ballidhiig ee gobolka Togdheer. Waxbarashadiisii hoose wuxuu ku dhamaystay magaalada Shiikh. Waxbarashadii dugsiga sarena wuxuu ku qaatay magaalada Boorame.
Mr. Siilaanyo markuu dhamaystay waxbarashadiisa jaamacadeed wuxuu Kusoo noqday dalka si uu cilmigiisa uga faa’ideeyo dalkiisa iyo dadkiisaba. Waxaanu dalkii la odhan jiray Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Somaliya kasoo qabtay xilal kala duwan oo ay kamid yihiin kuwan hoose:
SHAQADA IYO WAAYO ARAGNIMADA:
1965kii wuxuu xilal kala duwan kasoo qabtay Wasaaradda Qorshaynta Qaranka.
1969kii-1973kii Mr. Siilaanyo wuxuu ahaa Wasiirka Qorshaynta Qaranka
1973-1978 wuxuu ahaa Wasiirkii Ganacsiga
1973-1980 wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida Dhaqaalaha ee Qaranka 1980-1982kii wuxuu mar labaad noqday Wasiirka Ganacsiga.
Mr. Siilaanyo oo kamid ahaa aasaasayaashii ururkii SNM ee ka socday Dhinaca gudaha Somaliya, ka dib markuu u adkaysan waayey dhibaatadii iyo dibin daabadii Siyaad Barre ku hayey ummadda Somaliyeed gaar ahaana kuwa kasoo jeeda Somaliland, wuxuu sannadkii 1982kii go’aansday inuu dalka ka baxo oo ka qayb qaato halgankii dhinaca ka ahaa kaligii taliye Siyaad Barre si ummadda looga xoreeyo nidaamkii kali talisnimo.
Isla intuu Mr. Siilaanyo joogay London wuxuu lecturer ka bixin jiray Jaamacado ku yaal Ingiriiska iyo Maraykanka, waxaanu olalayn jiray qaddiyada xornimo udirirka ee uu gadhwadeenka u ahaa ururkii SNM.
HALGANKII SNM IYO DOORKUU KA QAATAY:
Isla markuu Mr. Siilaanyo dibadda u baxay wuxuu ku biiray halgankii dheeraa ee ummadda lagaga xoraynaayey taliskii Siyaad Barre waxaanu SNM kasoo qabtay xilal kala duwan.
Isla sannadihii 1982-1984 wuxuu noqday guddoomiyaha ururkii SNM ee laanta London. Wuxuu kaloo intuu London joogay u doodi jiray xuquuqda aadmiga ee ku tacadiyi jiray taliskii markaas talada hayey waxaanu la shaqayn jiray ururada xuquuqda aadmiga ee African Watch iyo Amnest International.
Mr. Siilaanyo oo ahaan jiray guddoomiyihii hore ee SNM 1984-1990 waxaa Lagu tilmaamaa inuu yahay guddoomiyii ugu wakhtiga dheeraa uguna fir fircoonaa ee soo qabta talada ururkii SNM. Intuu SNM ka madaxda ahaa wuxuu ururku guul balaadhan kasoo hooyey halgankii ballaadhnaa ee Shacbiga Somaliland ku qaadeen taliskii hore ee Siyaad Barre.
DOORKUU KA QAATAY DHISMAHA QARANKA IYO NADADAYNTA SOMALILAND
DHIIRIGELINTA HANNAAN SOCODKA DIMOQRAADIYADDA SOMALILAND
Mr. Siilaanyo isagoo dhiirigelinayaa hannaan socodka dimoqraadiyadda Somaliland wuxuu bishii Mey 2002 aasaasay xisbiga Nabadda, Midnimada iyo Horumarka ee KULMIYE. Xisbiga KULMIYE himiladiisu waa inuu dhiso dawlad kooban oo tayo leh oo hanata talada dalka si bulshadu u hesho daryeelka ay u baahan yihiin, dalkuna u gaadho horumarka la hiigsanaayo ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
Sidaan la socono KULMIYE wuxuu kamid yahay saddexda ee Xisbi ee qaranka waxaanu guul balaadhan kasoo hooyey labadii doorasho ee u danbeeyey doorashadii degaanka iyo tii madaxweynaha.
Waxaana shacbiga badankiisu aaminsanyahay in KULMIYE ku guulaystay doorashadii dalka ka dhacday, laakiin dawladdu wax is dhaafisay oo iyadoo adeegsanaysa haybaddii, awooddii iyo hantidii qaranka ay afduubtay natiijadii doorashada oo si aan xaq ahayn loogu dhawaaqay in xisbiga UDUB ku doorashadii guulaystay, inkastoo xisbiga KULMIYE caddeeyey inuu isagu doorashada ku guulaystay, Mr. Siilaanyo wuxuu markii danbe isagoo u tudhaaya oo dhowraya danta qaranka uu ka tanaasulay mawqifkii hore ee ahaa inuu isagu ku guulaystay doorashadii madaxweynimada. Mr. Siilaanyo oo loo arko nimaan jeclayn iskuna dhejin xukunka wuxuu maskabkii u sarreeyey maandeeq ee shacbigu u doorteen ka doorbiday xasiloonida iyo nabadgelyada dadkiisa iyo dalkiisa waxaanu kaga dhabeeyey hadalkii uu yidhi intii muranka natiijada
doorashadu socotay ee ahaa : “Somaliland cidkastaba anigaa uga lexojeclo badan dagaal iyo xasilooni darrana kama dhacaymayso”.
Mr. Siilanyo waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin daacad ah oo wakhtigiisii u lumiyey inuu adeego dadkiisa iyo dalkiisaba. Mr. Siilanyo waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aamin ah oo loogu iman karo ammaanada loo dhiibo, sidoo kalena hawl kar ah oo kasoo dhalaala xilka loo dhiibo.
Mr. Siilaanyo waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin deggan oo aan deg degin, waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay siyaasi xeelad dheer oo aragti fog. Mr. Siilaanyo waxa la yidhaadaa waa nin dadka jecel oo ummaddu aanay ukala sokayn.
Mr. Siilaanyo waa nin hadalka baaliqi ku ah oo dadka ka dhaadhin kara fikradiisa oo hadal ku qancin kara dadka taageersan iyo kuwa dhaliilsanba. Waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin jecel midnimada iyo wadajirka.
Ugu danbayna waxaa lagu tilmaamaa in Mr. Siilaanyo yahay nin nabad jecel waxaana la yidhaahdaa waa tabliiqiga nabadda Somaliland. Waxaanan odhan karnaa waa siyaasigii ugu horreeyey ee Afrikaan ah oo intuu maskabka ugu mudan ee shakhsi aadmi ah ifka ka qabto ku guulaysto ( Madaxweyne qaran), haddana faraha ka qaado isagoo doorbidaaya deganaanshaha iyo xasiloonida dalkiisa.
Waxaana xaqiiq ah inuu Mr. Siilaanyo dadkiisa uga tegidoono dhaxal la taaban karo oo ay xusi doonto taariikhda soo jireenka Somaliland. Ugu danbayna waxaan odhan karnaa Mr. Siilaanyo waa halyeyga Somaliland “ Somaliland hero ” ee qaranka ka saari kara wakhtigan kala guurka ee laga guurayo qaabkii beelaha loona hayaamaayo habka dimoqraadiyadda ee ku dhisan nidaamka axsaabta badan.
Taariikh nolaleedka Siilaanyo waxaan ka helay qayb kamid ah:
1. KULMIYE website, Ahmed Siilaanyo CV.
2. Waraysiyo aan la yeeshay qaar kamid ah madaxdii SNM iyo siyaasiyiin
kale oo Somaliland ah
3. Waraysiyo aan la yeeshay qaar kamid ah shacbiga Somaliland ee dhex
dhexaadka ah iyo qaar kamid ah taageerayaasha xisbiga KULMIYE.
Waxaa qoraalkan isku soo diyaariyay
Cabdi Cabdillahi Xasan (Mataan)